'Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra' MM Abiy - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, ODP
MM Abiyyiifi Obbo Lammaan tibbana Oromiyaa keessa rakkoon erga dhalatee booda jaarsolii biyyaa waliin Finfinneetti mari'atanii turan
Hoggantoonni dhaaba ODP hookkara torban darbe Naannoo Oromiyaatti mudate lubbuu namoota 78 galaafate booda godinaalee garaa garaatti imaluun ummata waliin marii gaggeessaa jiru.
Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa akka ibsetti guyyaa kaleessaa [Roobii] Ministirri Muummee Abiy Ahimadiifi Ministirri Raayyaa Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa magaalaa Harar galma Calanqootti marii gaggeessaniiru.
Hirmaatonnis godinaalee Harargee lameeniifi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa akkasumas Naannoo Harariirraa babbaahani.
Namni walgahii kanarra ture akka BBC'tti himetti dhimmoota torban darbe Jawaar Mohaammad qunnamaniifi kaan irratti gaaffiiwwan ka'anii mariin taasifameera.
Hawaasni marii kana irratti hirmaate ''quuqqaa jiru waltajjii kanarratti ofirraa buqqisee jiraa'' jedhu hirmaataan kuni.
'Jawaar Mohaammadirratti haleella qiyyaafate eenyutu ajaje, maaliif ajajame, eenyutu duuba jira?' jechuun gaafatan kan jedhu hirmaataan kuni hoggantoonnis 'seeratti dhiheessuuf hojjetamaa jira' jechuu isaanii hime.
MM Abiy Ahmad maal jedhan?
Gama kaaniin, MM Abiy wanti paarlaamaa keessatti dhimma miidiyaa dubbatan 'addatti OMN irratti kan hin xiyyeeffanne' akka ta'eefi miidiyaa hunda akka ilaallatu himuu BBC'tti hime.
''Jawaar addatti jalqabarraa hanga ammaatti eegaa jiru mootummaadha. Eegamuu waan qabuuf eegumsa ramadaafii jettanii nu gaafattaniittuu? Yoom nu gaafattan? Jawaarimmoo eegumsi na barbaachisaa na eegaa jedhee nu gaafatee beekaa? Nu'iim kan eegaa jiru. Maaliif akka hin taanetti wal hubanna? Maaliif akka hin taanetti walqeequun barbaachise?''
''Jalqabumarraa kaanee yoo inni miidhame nutu miidhama jennee kan hanga ammaatti eegaa jiru nu'i. Eeguu qofa osoo hin taane waan biraas waan baay'ee gooneerra''
Ministirri Muummee Abiy Ahmad waa'ee aggaammii Jawaar Mahaammad irratti raawwatee wayita dubbatan,''dogoggorri akka uumame dhagayeen jira.'' jedhan, garuu isa ammas kaasuu akka hin barbaanne ibsan.
Wayita darbe paarlaamaatti dhiyaatanii waan dubbatan keessaa jechi tokko akka hin taanetti Jawaar biratti hubatameera jedhan Ministirri Muummee Abiy Ahmad.
''Yeroo darbe paarlaamaarratti haasaa koo keessatti waa fayyadameen ture. Namoota biyya 'iskoortii' qabdan jedheera. An biyya lammataa jechuu kiyya. Jawaar garuu akka waanan waa'ee eegumsaa dubbadheetti fudhate. Waa'ee ajjeesuu, hidhuu yaada keessayyuu hin qabnu. Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra'' jedhan.
Dhimma siyaasaa biyyi kuni itti jirtu nuuf ifa hin taane nuuf ibsaa jechuun hoggantoonni gaafatamuu kan himan hirmaataan marii kanaa dhimma dhaabi ADWUI baqu ilaalchisees akka ifa tahu hirmaattonni gaafachuu himan.
Jawaar Mohaammad maaltu na mudate jedhe?
'Qabsaa'onni ODP keessatti maaliif dhiibamu?, ajjeechaan guutuu Oromiyaa keessatti ammas nurraa hin dhaabannee,' jechuun hirmaatonni isa gaafataniif Obbo Lammaan 'waan raawwachuu qabnu raawwannaa' jedhanii deebisuu isaanii hirmaataan kuni ni hima.
Gama biraatin, magaaloota Oromiyaa keessatti leellistonni 'sirna nafxanyaa maqaa Saatanaaw, Jaanoo fi Baala Adaraa' jedhuun gurmaa'uun ummatarra balaa qaqqabsiisaa jiru jedhanii gaafachuu isaanii himan.
Dirree dhawaatti Afaan Oromoon barachuuf akka hin dandeenye hirmaatan yaa'icha komatani gaaffii kaasuus dhagahameera.
Miidiyaa hawaasummaa irratti 'Ministirri Muummee waan Oromoof Oromummaa ganeetti haasa'ama' jedhamanii gaafatamanaan, MM Abiy 'gaaffii ummata Oromoo deebisuuf akka hojjatan,' dubbataniiru jedheera hirmaataan kuni.
Hokkara yeroo yeroon magaalaa Dirree Dhawaatti mul'atu furuuf koree dhaabanii qulqulleessuuf akka yaadan MM Abiy dubbachuu isaanii dhagahameera.
Akka hirmaataan kuni jedhutti gaaffii gaafatameef deebiin kenname miira hawaasaa amma tokko qabbaneesseera jedha.
Ministeerri Galiiwwanii Aadde Adaanach Habeebee Godina Baalee dhaqun kan marii gaggeessan yoo ta'u Itti gaafataman Waajjira ODP magaalaa Jimmaatti marii gaggeessaniiru.
TPLF fi Shanee shorokeessummaan farrajuun nageenya Itoophiyaa garam geessa?
Daqiiqaa 52 dura
Keeneet Kaawundaa - lammileen Afrikaa seenaa isaanii dagachaa jiruu?